‘पिएसजी नगएको भए नेयमारले बालोन डी’ ओर जितिसक्थे’ ! | Hamro Khelkud
‘पिएसजी नगएको भए नेयमारले बालोन डी’ ओर जितिसक्थे’ !
एजेन्सी – पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) नगएको भए ब्राजिलियन सुपर स्टार नेयमारले क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोन मेस्सी पछि स्वत बालोन डी’ ओर जितिसक्ने टोटेनहमका पूर्व प्रशिक्षक आन्द्रे भिलास बाओसले बताएका छन् ।
नेयमार दुई वर्षअघि बार्सिलोनाबाट पिएसजी पुगेका थिए । बार्सिलोनामा रहँदा मेस्सीको छायाँमा पर्ने भएका कारण नेयमारले पिएसजी जाने निर्णय लिएको बताइएको थियो । यत मेस्सीले भने बार्सिलोनामा पहिला जस्तै स्तरीय प्रदर्शनलाइ निरन्तरता दिदै आएका छन् । मात्र दुई वर्षपछि नेयमार फेरि बार्सिलोना फर्कने चर्चा चलेको छ ।
भिलास बाओसको नजरमा नेयमार रोनाल्डो र मेस्सी जत्तिकै क्षमतावान खेलाडी हुन् । यदि उनी अहिले बार्सिलोनामा रहेको अवस्था हुन्थ्यो भने नेयमारले बालोन डी’ ओर जितिसक्ने भिलास बाओसको विश्वास छ ।
भिलास बाओसले भने ‘उनी विश्व फुटबलका महत्वपूर्ण खेलाडी हुन् । मेरा लागि उनी रोनाल्डो र मेस्सीपछिका बालोन डी ओरका हकदार नेयमार हुन् ।’ तर, उनले बार्सिलोनाकै जस्तो स्तरीयतालाई निरन्तरता दिन नसकेको पूर्व प्रशिक्षकको बुझाई छ ।
‘नेयमारले छाड्ने समाचार लिग १ का लागि राम्रो होइन । फुटबलका लागि उनी महत्वपूर्ण खेलाडी हुन् । जसरी पेरिसमा हुँदा रोनाल्डिन्हो महत्वपूर्ण थिए,’ उनले भने,’ त्यस्ता खेलाडीसँग एकखालको आकर्षण हुन्छ । तर, मलाई थाहा छैन के हुन्छ । उनले पेरिस छाड्ने विषयमा बोल्न म पिएसजीको प्रशिक्षक होइन । ‘